I-Cottage ye-Private Trendy kwi-Prime Suburb
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLinda And Allie
Iyonke, yabucala ngokupheleleyo kwaye isimahla, yanamhlanje, inesitayile kwaye ivulekile, indlu yokuziphekela yimizuzu emi-6 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya. Imiswe emthini egcwele indawo yentengiso yedolophu, ikufutshane nepropati ekhuselekileyo yomninimzi, kuma-45m ukusuka kwisitalato. KUNENE njengoko kubonisa imifanekiso ehlaziyiweyo. Ingaphakathi elihle kunye nefenitshala esemgangathweni kunye nezixhobo zombane kulo lonke. Iindawo zokutyela eziphakamileyo kunye neevenkile eziphantsi kwe-3 min drive.Indawo yokupaka yabucala yeemoto ezi-2 kunye nepatio yangasese, i-BBQ, igadi, i-AC kunye ne-WIFI ekhawulezayo, konke oko kukunandipha kuphela.
Indlu epheleleyo icocekile nge-100% phakathi kwazo zonke iindwendwe.
Indlu eyi-53 sq meter (570 sq Ft) kwiyadi yakho yabucala eyi-280 sq meter (3040 sq Ft) ifikelelwa endleleni, ngokuthe ngqo nge-pan-handle driveway, edlula kwindlu yomninimzi kwaye ibekwe kumhlaba wabucala owahluliweyo. Ixhotyiswe ngokupheleleyo ukuqinisekisa ukuba amava akho okuzenzela ukutya kuluvuyo, ukusuka nakukuphi na ukupheka kunye nokonwabisa, ukuya ekuhlambeni impahla.
Kwindawo yakho yabucala ejikeleze i-cottage yakho ungayonwabela i-BBQ yakho yabucala (ibraai) enegridi kunye neenkuni kunye nayo yonke enye into oyifunayo, okanye uhlale elangeni kwaye ujabulele imithi emikhulu kunye neentaka ezijikeleze indlu yakho.
Okanye ukonwabele ukudlala eminye yemidlalo yebhodi ethandwayo okanye uhlale kakuhle ngaphakathi kwaye ubukele i-DSTV yesathelayithi epheleleyo okanye usasaze iFiber Netflix ngokukhawuleza, (ngamandla aqhubekayo eTV, iWIFI, isibane kunye neetshaja, xa kucinywa umbane weSizwe xa uLoad-shedding is esebenzayo), ngaphambi kokuthatha umhlala-phantsi ukuze aphumle kwiibhedi ezisemgangathweni (ukumkanikazi omnye kwigumbi lokulala kunye nebhedi ephindwe kabini evulwe kwisofa yokulala ekwindawo yokuphumla), ngelixa uphumla kwindawo epholileyo enemozulu epholileyo, ukuphumla ngoxolo kwindawo ekhuselekileyo, ezolileyo. , indawo yabucala kunye nendalo.
Eli khaya liphezulu, lizinze kakuhle, ligqunywe yimithi, linayo yonke into enokubonelela ngayo:
•3.6km ukuqhuba ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya (imizuzu emi-6)
•6.8km ukusuka eNelson Mandela Stadium (12 imizuzu)
•6.4km xa uqhuba ukusuka elunxwemeni lweflegi eBlue (9 imizuzu)
•2.8km drive ukusuka eSt Georges Cricket Stadium (4 imizuzu)
• ngaphantsi kwemizuzu esi-8 ukuya kwisikolo esiseGrey neseCollegiate.
•500m ukusuka kwaSuper Spar ukwenzela igrosari notywala
•1 km ukusuka kwiindawo zokutyela eziphezulu kunye neevenkile zekofu
•2.9km ukusuka kubhazabhaza wevenkile, kuzo zonke iimfuno zakho (imizuzu emi-5 yokuqhuba)
•1.5km ukuya kwiGym
•8km (12 imizuzu) ukusuka Boardwalk Casino
•8km (imizuzu eli-12) ukusuka kwiithiyetha zeMovie eBoardwalk kunye neendawo zokutyela ezininzi kunye nokonwabisa.
•500m ukusuka kwisikhululo seNkonzo yamaPolisa asekuhlaleni kunye nePosi.
Indawo yomninimzi ikufuphi nendawo yakho yokuma yasimahla, indlu yabucala kwiyadi yayo kwaye ngenxa yoko siyafumaneka nanini na ufuna ukuba sikuncede ngayo nayiphi na inkxalabo. Inkxaso yethu yobuqu kunye nenobuchule kakhulu kuzo zonke iindwendwe sisiqinisekiso, nanini na xa kufuneka.
Indawo yomninimzi ikufuphi nendawo yakho yokuma yasimahla, indlu yabucala kwiyadi yayo kwaye ngenxa yoko siyafumaneka nanini na ufuna ukuba sikuncede ngayo nayiphi na inkxalabo. In…